လှယျလှယျလေး ခဈြခဲ့တာ မဟုတျတော့ လှယျလှယျလေး မဖေို့ခကျတယျ …. – Shinyoon
နရောတကာမှာ ရငျဘတျကွီးနဲ့ ရငျးတတျတော့ နရောတကာမှာ ကိုယျက အစှဲအလမျးကွီးတတျတယျ … လူတဈယောကျကို ခဈြမိဖို့လဲ သိပျခကျသလို ခဈြပွီးသှားရငျလဲ မုနျးလိုကျဖို့သိပျခကျတယျ နာစရာတှပေေးရငျတောငျ သူ့ကို ငါကွငျနာနတောပဲလေ အခဈြဆိုတာ အမွဲတမျး ခြိုမွိနျတာမှ မဟုတျတာဆိုတဲ့ အတှေးနဲ့ပဲ ကိုယျ့ကိုယျကိုဖွတေယျ ….
ခဈြခဲ့ပွီးပွီပဲ မဖွဈနိုငျတဲ့အဆုံးမှာ မပေ့ဈလိုကျတော့ တဲ့ လှယျလှယျလေး ခဈြခဲ့တာမှ မဟုတျပဲလေ … အခြိနျက ကုစားသှားမှာပါဆိုတဲ့ စကားတှကေို တကယျထငျခဲ့ဖူးတယျ ဒါပမေယျ့ အခြိနျတှေ ကွာလာတာပါ ဒဏျရာဟာ နာတာပါပဲ ပွီးတော့ ခဈြတဲ့စိတျကလဲ ခဈြနတောပါပဲ … မမေ့ရတဲ့ စိတျတှဟောလဲ အရငျကလိုပါပဲ သတိရပါတယျ ။
သူနဲ့ စခဈြခဲ့တုနျးက ကိုယျ့ကိုပဲ အဆုံးထိခဈြလိမျ့မယျဆိုပွီး ယုံကွညျခဲ့ဖူးတယျလေ … ကိုယျ့အခဈြတှကေ စဈမှနျခဲ့တာပဲ သူ့အခဈြတှကေလဲ ဖွူမယျထငျခဲ့တာပေါ့ အဲ့လောကျ မတုံးအသငျ့ဘူးဆိုတာ အရငျတုနျးက စာမတတျခဲ့တော့ မသိခဲ့ဘူးလေ … တဈသကျစာဆိုပွီး ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ကတိတှကေို တကယျအဟုတျကွီး မှတျနမေိတဲ့ကိုယျက ရူးတာပေါ့ ….
လူတခြို့လို ရငျဘတျထဲက မပါပဲ ခဈြတယျဆိုပွီး လှယျလှယျလေးပွောတတျခဲ့တာ မဟုတျတော့ မဖွဈနိုငျလို့ပါ မခဈြနိုငျလို့ပါဆိုပွီး ပွီးဆုံးသှားတဲ့ ဇာတျလမျးတှမှော ကနျြရဈခဲ့တုနျးက ကနျြရဈခဲ့ပွီးသလို မလေို့ကျဖို့ကတြော့ ကိုယျထငျသလောကျ မလှယျခဲ့ဘူးလေ … လူတဈယောကျကို မုနျးလိုကျဖို့လှယျပမေယျ့လဲ တကယျမလေို့ကျဖို့ကတြော့ ခကျခဲတယျ ။
လွယ်လွယ်လေး ချစ်ခဲ့တာ မဟုတ်တော့ လွယ်လွယ်လေး မေ့ဖို့ခက်တယ် ….
နေရာတကာမှာ ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ ရင်းတတ်တော့ နေရာတကာမှာ ကိုယ်က အစွဲအလမ်းကြီးတတ်တယ် … လူတစ်ယောက်ကို ချစ်မိဖို့လဲ သိပ်ခက်သလို ချစ်ပြီိးသွားရင်လဲ မုန်းလိုက်ဖို့သိပ်ခက်တယ် နာစရာတွေပေးရင်တောင် သူ့ကို ငါကြင်နာနေတာပဲလေ အချစ်ဆိုတာ အမြဲတမ်း ချိုမြိန်တာမှ မဟုတ်တာဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြေတယ် ….
ချစ်ခဲ့ပြီးပြီပဲ မဖြစ်နိုင်တဲ့အဆုံးမှာ မေ့ပစ်လိုက်တော့ တဲ့ လွယ်လွယ်လေး ချစ်ခဲ့တာမှ မဟုတ်ပဲလေ … အချိန်က ကုစားသွားမှာပါဆိုတဲ့ စကားတွေကို တကယ်ထင်ခဲ့ဖူးတယ် ဒါပေမယ့် အချိန်တွေ ကြာလာတာပါ ဒဏ်ရာဟာ နာတာပါပဲ ပြီးတော့ ချစ်တဲ့စိတ်ကလဲ ချစ်နေတာပါပဲ … မေ့မရတဲ့ စိတ်တွေဟာလဲ အရင်ကလိုပါပဲ သတိရပါတယ် ။
သူနဲ့ စချစ်ခဲ့တုန်းက ကိုယ့်ကိုပဲ အဆုံးထိချစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီး ယုံကြည်ခဲ့ဖူးတယ်လေ … ကိုယ့်အချစ်တွေက စစ်မှန်ခဲ့တာပဲ သူ့အချစ်တွေကလဲ ဖြူမယ်ထင်ခဲ့တာပေါ့ အဲ့လောက် မတုံးအသင့်ဘူးဆိုတာ အရင်တုန်းက စာမတတ်ခဲ့တော့ မသိခဲ့ဘူးလေ … တစ်သက်စာဆိုပြီး ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ကတိတွေကို တကယ်အဟုတ်ကြီး မှတ်နေမိတဲ့ကိုယ်က ရူးတာပေါ့ ….
လူတချို့လို ရင်ဘတ်ထဲက မပါပဲ ချစ်တယ်ဆိုပြီး လွယ်လွယ်လေးပြောတတ်ခဲ့တာ မဟုတ်တော့ မဖြစ်နိုင်လို့ပါ မချစ်နိုင်လို့ပါဆိုိပြီး ပြီးဆုံးသွားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေမှာ ကျန်ရစ်ခဲ့တုန်းက ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီးသလို မေ့လိုက်ဖို့ကျတော့ ကိုယ်ထင်သလောက် မလွယ်ခဲ့ဘူးလေ … လူတစ်ယောက်ကို မုန်းလိုက်ဖို့လွယ်ပေမယ့်လဲ တကယ်မေ့လိုက်ဖို့ကျတော့ ခက်ခဲတယ် ။